तपाईको गुनासो दायित्वहरु पुरा गर्न असमर्थ? | Law & More B.V.
ब्लग » यदि तपाईं आफ्नो भित्री दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईं आफ्नो भित्री दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?
डिसेम्बर 24, 2020
भूतपूर्व रखवाली को योगदान को रूप मा एक पूर्व पति या पत्नी र बच्चाहरु लाई एक भत्ता हो। गुजारा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई मर्मत debणी पनि भनिएको छ। गुनासो प्राप्त गर्नेलाई प्रायः मर्मतको हकदार व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। गुनासो एक रकम हो जुन तपाईंले नियमित आधारमा तिर्नु पर्छ। अभ्यासमा, गुनासोलाई मासिक भुक्तानी गरिन्छ। भूतपूर्व णी हुन्छ यदि तपाइँसँग एक पूर्व पार्टनर वा तपाइँको बच्चा प्रति मर्मत दायित्व छ। तपाईंको पूर्व पार्टनर प्रति एक रखरखाव दायित्व उठ्छ यदि ऊ वा उनी आफैंको लागि उपलब्ध गराउन असमर्थ छ भने। परिस्थितिले तपाईंलाई आफ्नो पूर्व पार्टनरलाई भत्ता भुक्तान गर्नबाट रोक्न सक्छ। तपाईंको आय को कारण परिवर्तन भएको हुन सक्छ, उदाहरणको लागि, कोरोना संकट। यदि तपाइँसँग भेट्न नसकिने गुनासो तिर्ने दायित्व छ भने कार्य गर्नको लागि उत्तम तरिका के हो?
सबै भन्दा पहिले, मर्मत लेनदेन, तपाइँको पूर्व पार्टनर संग सम्पर्क गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको आय परिवर्तन भएको छ र मर्मत दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। तपाईं सम्झौतामा पुग्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ सहमत हुनुहुनेछ कि तपाइँ पछि दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ वा गुनासो कम हुनेछ। यी सम्झौताहरू लिखित रूपमा रेकर्ड गर्नु उत्तम हो। यदि तपाईंलाई यसको साथ मद्दतको आवश्यक छ भने, किनकि तपाईं सँगै सम्झौतामा आउन सक्षम हुनुहुन्न, तपाईं मध्यस्थकर्तामा कल गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो सम्झौता गर्न।
यदि एकसाथ सम्झौताहरू सम्म पुग्न सम्भव छैन भने, यो मर्मत सम्भारको दायित्व अदालतले पुष्टि गरेको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गरिनु पर्छ। यसको मतलब मर्मत सम्भारको दायित्व आधिकारिक रूपमा अदालतले हालेको छ। यदि दायित्व पुष्टि गरिएको छैन भने, मर्मत लेनदेन ले यति सजिलै भुक्तानी लागु गर्न सक्षम हुनेछैन। त्यो केसमा अदालतले कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्न योग्य निर्णय हुँदैन। LBIO (Landelijk Bureau Bureau Inning Onderhouddsbijdragen) जस्ता संग्रह एजेन्सीले पैसा स collect्कलन गर्न सक्दैन। यदि दायित्व कानुनी रूपमा लागू योग्य छ भने, मर्मत लेनदेनले सकेसम्म चाँडो कार्य गर्नुपर्नेछ। रखरखावको हकदार व्यक्तिले त्यसपछि जफत गर्न स init्कलन सुरु गर्न सक्दछ, उदाहरणका लागि, तपाईंको आय वा तपाईंको कार। यदि तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सकेसम्म चाँडो एक वकिलबाट कानुनी सल्लाह लिन बुद्धिमानी हुन्छ।
त्यस पछि सारांश कार्यवाहीमा प्रवर्तनको विवाद सुरू गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया एक जरुरी प्रक्रिया को रूप मा पनि चिनिन्छ। यस प्रक्रियामा तपाई न्यायाधीशलाई भुक्तानी लागू गर्ने सम्भावनाको मर्मत लेनदेनबाट वञ्चित गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। सिद्धान्तमा, न्यायाधीशले रखरखाव दायित्वको सम्मान गर्नुपर्नेछ। जहाँसम्म, यदि त्यहाँ वित्तीय आवश्यकता छ जुन मर्मत सम्बन्धी निर्णय पछि देखा पर्दछ, त्यहाँ कानूनको दुरुपयोग हुन सक्छ। रखरखाव दायित्व अपवाद इसलिए विशेष केसहरूमा गर्न सकिन्छ। कोरोना संकट यसको कारण हुन सक्छ। यो एक वकील द्वारा मूल्यांकन गर्न राम्रो छ।
तपाईं गुनासो पनि परिवर्तन गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं वित्तीय समस्या लामो समय सम्म रहन आशा गर्नुहुन्छ, त्यो एक व्यावहारिक विकल्प हो। त्यसो भए तपाईले मर्मत सम्भारको दायित्व परिवर्तन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेछ। भोलिको राशि परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ 'परिस्थितिको परिवर्तन' छ भने। यो केस हो यदि तपाईंको आय मर्मत सम्भार दायित्व को निर्णय पछि महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ।
बेरोजगारी वा settlementण निपटान सामान्यतया स्थायी अवस्था हुँदैन। यस्तो अवस्थामा, न्यायाधीशले अस्थायी रूपमा तपाईंको मर्मत दायित्व कम गर्न सक्दछ। न्यायाधीशले यो पनि निर्णय गर्न सक्दछ कि तपाईले केहि पनि तिर्नु पर्दैन। तपाईं कम काम गर्न रोज्नुहुन्छ वा काम पनि रोक्नुहुन्छ? त्यसोभए यो तपाईंको आफ्नै निर्णय हो। न्यायाधीशले त्यसपछि गुनासो तिर्ने तपाईंको दायित्व समायोजन गर्न सहमत गर्दैन।
यो त्यस्तो मामला हुन सक्छ कि तपाइँ बाल समर्थन र / वा spousal समर्थन तिर्नुहुन्छ जब न्यायाधीश संलग्न हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा, तपाईं, सिद्धांत रूपमा, रोक्न वा कम गर्न सक्नुहुन्छ गुनासो भुक्तानी यो तपाईं को कुनै प्रत्यक्ष परिणाम बिना। यो किनभने तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग एक लागू योग्य शीर्षक छैन र त्यसैले कुनै संकलन उपायहरू लिन सक्दैन र तपाईंको आय वा सम्पत्तिहरू कब्जा गर्न सक्दैन। तपाइँको पूर्व पार्टनरले यस केसमा के गर्न सक्दछ, जे होस्, रखरखाव सम्झौता पूरा हुन / रद्द गर्नका लागि अनुरोध गर्नको लागि एउटा निवेदन पेश (वा समनको रिट दायर गरेको छ)।
अदालतले मर्मत सम्भारको दायित्व स्वीकृत गरेको छ वा छैन, हाम्रो सल्लाह बाँकी नै छ: अचानक सबै भुक्तानी नगर्नुहोस्! पहिले तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि यस परामर्शले समाधान नलागेमा, तपाईं जहिले पनि अदालतसामु कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंसँग गुनासोको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा तपाईं भनाईको लागि आवेदन दिन, परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। मा Law & More हामी बुझ्छौं कि सम्बन्धविच्छेद र त्यसपछिका घटनाहरूले तपाईंको जीवनमा टाढाका परिणामहरू लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्छौं। तपाईंसँग र सम्भवतः तपाईंको पूर्व पार्टनरसँगै, हामी दस्तावेजको आधारमा बैठकमा तपाईंको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्न सक्दछौं र भोलिको सम्बन्धमा ((पुनः) गणना) सम्बन्धमा तपाईंको दर्शन वा इच्छालाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यसपछि रेकर्ड गर्नुहोस् उनीहरु। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई सम्भावित गुनासो प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्दछौं। मा वकीलहरू Law & More पारिवारिक कानूनको क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र यस प्रक्रिया मार्फत तपाईको पार्टनरसँगै गाइड गर्न खुशी छन्।
अघिल्लो पोस्ट निर्देशकको रुचि को द्वन्द्व
अर्को पोस्ट घर मालिकको दायित्व